Nhau, 01 Chikumi 2017
VaMugabe Votanga Kutsvaga Rutsigiro Asi Vamwe Vachitya Kudzoka kweMhirizhonga
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemusi weChishanu vari kutarisirwa kuparura hurongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya vachikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Mapurisa Oshorwa Nekushandisa Chisimba kuVashandi veMugodhi weTurk Vairaitidzira
Vashandi vemugodhi uyu vanonzi vakatanga kuratidzira vachinyunyuta nekusabhadharwa kwavo mihoro yavo kwemwedzi mitatu, sezvo kambani yavo iri kunzi iri kuti haisi kuwana mari.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikumi 01, 2017
Mapurisa anorova zvakaipisisa mhuri dzevashandi vepamugodhi weTurkey Mine mushure mekunge madzimai evashandi ava varatidzira vachiti vanoda kuti varume vavo vabhadharwe mari dzavo.
Sweden Inobatsira Zimbabwe $8m Yekubatsira Vanotambura
Afrobarometer Inoti Vanhu vemuZimbabwe Votyira Mhirizhonga Musarudzo dza2018
Ongororo yakaitwa nesangano reafrobarometer ichishanda nesangano remass Public Opinion Institute yemuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vemunyika vanoda sarudzo dzakachena asi vari kutya mhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Pastor Mugadza Vosimudzira Basa Raiitwa naVaITai Dzamara
Mufundisi vanorwira kodzero dzevanhu, VaPatrick Mugadza vatanga kugara muAfrica Unity Square muHarare vachiti vave kuenderera mberi nebasa rakasiiwa neVaItai Dzamara avo vakatorwa nevanhu vanofunidzirwa kuti vasori makore maviri apfuura.
Kusajeka kweMashoko Pamusoro peMagwaro eKugara neKushanda muSouth Africa Kwotyisa Vakawanda
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Special Permits zviri kuyambirwa kuti zvigare zvakangwarira kumatsotsi anogona kuzvibira mari zvichitevera kutenderedzwa kwemashoko ekuti zvave kukwanisa zvakare kunyoresa kuti magwaro aya awedzerwe nguva.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chivabvu 31, 2017
Afrobarometer inoburitsa mashoko anoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga munguva yesarudzo.
Chivabvu 30, 2017
Madzimai Otyira Mhirizhonga Musarudzo dza 2018
Vachitaura pamusangano waitwa mudhorobha reMasvingo, madzimai abva kunzvimbo dzakasiyana siyana ati nyaya dzekutyisidzirana dzakatotanga nekudaro mhirizhonga inogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo dzakanaka gore rinouya.